Talooyinka marka la fulinayo LADM - Geofumadas
Oktoobar, 2016 cadastre, Featured, egeomates My, Maamulka Land
Dhowr mashruuc oo aan kaqeyb qaatay, waxaan markhaati ka ahaa in jahwareerka uu keenay LADM uusan daruuri aheyn inuu laxiriiro fahamkiisa heerka ISO, laakiin kalasoocida baaxadeeda fikradeed ee dhanka farsamada farsamadeeda. Si kale haddii loo dhigo, sida loo hirgaliyo.
Waa inay cadaato in LADM uusan aheyn heerka caadiga ah ee ISO, maadaama ay noqon laheyd halbeeg maareynta metadata (ISO-19115), si loo bixiyo tusaale, ama halbeeg lagu eego indho indheynta iyo cabirka (ISO-19156). Waxay la mid yihiin macnaha in lagu dabaqo anshax takhasus gaar ah leh, midkoodna labadan xeerar ma awoodi doono inay fahmaan adeegsade aan ahayn geomatist u heellan akhriska wanaagsan ee boggaga la xiriira iyo cilmi-baarista geofumed; xitaa haddii aad taqaanid sida loo sameeyo qaab-qaabeed ama aad ugu shubatid saldhig guud; tababarku had iyo jeer waa lagama maarmaan in la ogaado sida loo hirgeliyo heerka ISO.
Arrintaas oo ah shuruuda ISO-ga u baahan tahay aqoonsi xirfadeed (ganacsi) waa waxa ka dhigan heerka ISO-19152 oo loo yaqaano LADM waa wax aad u adag in la fuliyo; sababtoo ah maamulka dhulka waa mawduuc kaas oo farsamooyin takhasus ah oo fara badan, farshaxan oo jadwalka jaamacadaha yaryar la siinayo oo kaliya oo leh cabbirkaas.
Ogaanshaha LADM ayaa aad uga badan fahamka sida baakadaha UML, fasallada, iyo subclasses-ku u shaqeeyaan; waxaa loo baahan yahay in la ogaado xaaladda dhabta ah ee maamulka xuquuqda; labadaba dhinaca Diiwaanka iyo ka Cadastre iyo sawir gacmeedka, sharciga gaarka loo leeyahay, sharciga dadweynaha, dacwadaha sharciga iyo maamulka. Halkii laga baran lahaa in loo beddelo gelitaanka diiwaangelinta ee RRR, LADM waxay u baahan tahay in dadaal loo sameeyo sida ugu fudud ee suurtogalka ah, si loo jaangooyo waxa horeyba ugu dhacay nolosha dhabta ah, shuruudaha ay ku helayaan iyadoo loo eegayo macnaha guud iyo sharciga qaranka, maadaama RRR-kani waa natiijada rabitaan ee dhinacyada oo kaliya uu turjumay nootaayo, oo si gabay ah u maamuusay ficil, kaas oo ay lasocoto macluumaadka uu kalabar ka fahmay shahaada cadastral, taas oo iyaduna fasiraad u ah sahamiyaha mar laga sameeyay xaqiiqda jir ahaaneed, iyo, kadib shaqo culus oo tarjumaad iyo xasuusin maskaxeed oo ku saabsan shuruudaha, isreebreebka ayaa amar ku bixiyay in lagu soo qoro karraaniga, si ugu dambeyn loo gaaro rikoorka oo ay tahay inuu isku dayo inuu mar kale tarjumo, waxa karraaniga qoray, yaa turjumay isreebreebka, oo turjumay nootaayo, oo u fasiray doonista dhinacyada, inuu saxeexo diiwaangelin ama diidmo ... halkaas haddii mid uun ka mid yahay qufac ayaa ku qaldanaa fasiraadiisa!
Qaabeynta ayaa ah mid ka mid ah caqabadaha ay qabaan geofumados-ka Beyond Catastro 2014 inay dib ugu soo laabtaan 1994, taasoo maanta noqon doonta mid caadi ah. Waxay ahaayeen kuwo si daacad ah u saxan, in kasta oo tusaalayaashu ay tahay ficil caqli fayow oo caadi ah, waxay iloobeen in tani ay tahay caqliga ugu yar ee aadanaha. Qaabeynta waxay tusineysaa laylis gorgortan oo udhaxeeya xirfadleyda ganacsiga: nootaayo, saham, geomatist, sahamiyaha, duubiyaha, oo ay tahay inuu barto UML aasaasiga ah; iyo isticmaalayaasha kumbuyuutarka ee waajib ku ah inay xilka ka degaan si ay u fahmaan nolosha dhabta ah ee waxa ay isku dayayaan inay otomaatiga u noqdaan.
Fahanka maamulka dhulka ayaa tilmaamaya in la ogaado mabaadii'da diiwaanka ee leh nidaam guud, ugu yaraan qayb weyn oo ka mid ah adduunka galbeedka:
Mabda 'Duceeya, taasoo ka hortagaysa in xannibaad deyn ama deyn nooc ka mid ah waxaa lagu dhisay si toos ah, haddii aan oggolaansho sharciga, mabda'a ogolaanshaha taas oo dhigayaa in sharciyada by shirweynaha qaran ama xujo mas'uul ka gudbay di'i laga yaabaa in sida digniin ama ogeysiis uga digayna, mabda'a of sumcad tilmaamaysa in user kasta oo si fiican u ah waa in ay ogaadaan in lacag dhimis macdanta ah ama meel ka mid ah nidaam gaar ah oo saamayn ku leh lahaanshaha, isticmaalka ama shaqo, qaas ahaan ku kala awoodaha diiwaangelinta dalka, mabda'a diiwaangelinta taasi oo ka tarjumaysa shay dhul u baahan maraya socodka ah si ay u leeyihiin aqoonta sharci ... iyo wixii la mid ah si loogu badalo aasaaska sharci ee nidaamka ka mid ah xeerarka in loo fududeeyo LADM dheer gabay qorshe hawleed ku adag in la qeexo inkastoo profile UML uu leeyahay ama saldhig macquul ah ku siinaya qufac jirka; ugeystey nidaamka siyaasadaha, xeerarka, iyo nidaamyada u baahan yahay in ka badan isagoo gabayaa.
Ka dib markii aan ku soo bandhigay Machadka Agustín Codazzi ee ku saabsan qaab dhismeedka ICDE iyo bandhiggaygii toddobaadkan ka socda waddan ku yaal Bartamaha Ameerika, waxaan awoodi doonaa inaan dabagal ku sameeyo mawduuca. Hada jawaabo yar oo madow iyo cadaan ah:
Hirgelinta LADM waxay bedeshaa habka aanu u Diiwaangalino?
Ku dhaqankeeda Maya Faham qeyb ahaan. U farsamee, hubaal haa.
Miyay lagama maarmaan u tahay isticmaalayaasha aag weyn (ganacsi) inay ogaadaan LADM?
Fahan haa. Sida loo hirgaliyo ... qasab maahan.
Ma la samayn karaa nidaam cusub oo aan la hirgelin karin LADM?
Miyaa lagama maarmaan in la badalo sharciga ama qaabdhismeedka hay'adaha si loo fuliyo LADM?
Miyuu LADM dhab ahaantii ubaahnahay inuu noqdo ISO?
Ka dib markaan arkay aaladaha kala geddisan, dhibaatooyinka is-dhexgalka diiwaangelinta ee 'cadastre', iyo kharashyada badan ee is-dhexgalka, hubaal waa inay jirtay waqti hore. LADM waxay gacan ka geysaneysaa sii wadida ganacsiga, oo aan waligiis isbeddelin, in kasta oo aaladda ay tahay in dib loo qiimeeyo 10-kii sanaba mar.
Maxay yihiin tallaabooyinka lagu fahmi karo LADM?
Akhriso Beyond Catastro 2014, fahamka nidaamka cadastral, fahamka nidaamka nootaayooyinka, fahamka nidaamka diiwaangelinta, fahamka sharciga nidaamka gaarka ah, tarjumaadda ISO-19152 iyadoo lagu saleynayo tan, wax ka baro khibradaha, xumaanta iyo wanaaga kahor aqrinta ...
Maxay yihiin tallaabooyinka lagu qaado qaabka LADM?
Qaado astaan ​​guud, u kala saar afar afar geesood, ka fadhiiso dadka meesha sharciga ka dhisan si ay u dhisaan fasallada BA_Unit, fadhiiso dadka cadastre si ay u dhisaan fasallo ballaadhan iyo qaab dhismeed, u fadhiiso labadaba si aad u dhisto xiriirka gaarka ah ee sharciga, cinwaanka a sharciyeynta sharciga dadweynaha iyo dhisida feyl iyo habraac, sharciyada kale si tartiib tartiib ah wax looga qabto, fududeeynta isha.
Maxay yihiin tallaabooyinka lagu hirgelinayo LADM nidaam cusub?
Jaangooyo astaan ​​guud oo macquul ah, ka fudud ayaa ka fiican. Samee muuqaal jireed, codso qalab loogu talagalay macaamil ganacsi iyo qaabeynta, la qabsashada habsami u socodka, kobcinta ama la qabsashada aaladda habka ilaaliya meertada nolosha ... haddii la doorbidayo in la beddelo nidaamka ku saleysan hab maamuuska dalka.
Xaggee ka arki kartaa tusaalooyinka fulinta LADM ee asalka Hispanic?
Haddii aad rabto inaad ku aragto laylis horudhac ah CCDM ka hor intaan loogu yeerin heerka ISO-19152, waxaa habboon inaad SINAP ku aragto Honduras. Ma aha oo keliya nidaamka teknoolojiyadda ee SURE Unified Registry, laakiin sidoo kale sharciga nolosha siiyay nolosha sharciga iyo sharciga isticmaalka dhulka. Muddada dhexe, waxaa habboon in la arko isbeddelka SURE, taas oo ah geeddi-socod socda oo hoos imanaya iskaashi dawladeed iyo mid gaar loo leeyahay, oo laga yaabo bolckchain.
Haddii aad rabto inaad aragto qalab dowladeed oo u hoggaansamaya LADM, waxaad ku arki kartaa SIGIT-ka Puerto Cortés, Omoa Puerto Barrios bulshada udhaxeysa Guatemala iyo Honduras, oo leh aaladda websaydhka macmiilka ee OpenLayers, lakabka cadastral-ka ah iyo xitaa diiwaangelinta guryaha iyada oo diiradda la saarayo xarunta xiriirka la leh hay'adda qaranka. In kasta oo ay adkaatay in loo hirgeliyo sidii la rabay, haddana qaabku waa qaddar gogooni ah, oo laga yaabo inuu keeno miro dhow marka la eego xaaladda El Salvador.
Haddii aad rabto inaad aragto qalab adeegyada dayactirka cadastral degaanka GML / WFS nidaamka qaran, waxay ku arki kartaa degmada SIT ee Association of Degmooyinka of Honduras, horumariyo heerka macmiilka QGIS, oo lagu daray dhalatada kale oo interoperability ilaa BentleyMap V8i aan I-model.
Haddii aad rabto inaad aragto geedi socodka fulinta, farxad leh, ku dhowaad sida Eebe wuxuu Fari, arki waayo-aragnimo ah ee hadda jira ee Agustín Codazzi Institute iyo Superintendency of Registry iyo Nootaayaha, Falanqeynta kubada cagta ee Colombia. U adeegsiga INTERLIS si loo dedejiyo hirgelinta, caqabad wanaagsan oo ka timaad furitaanka iyo wada noolaanshaha ESRI iyo IDE oo u shaqeeya sidii xudunta Maamulka Dhulka.
Haddii aad rabto inaad aragto layli rajo, oo waxay qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah, laakiin ugu danbeyn gaari hab Tropicalized soo jeedinaynaa in soo socda horumarinta SIICAR2 ee Nicaragua.
Iyo haddii aad shaki qabto ... waxaa jira boostadeyga.
Post Previous" Hore Bentley Systems dhawaaqday finalka la waxyoonay 2016
Post Next Microstation CONNIT Edition - Waa inuu la qabsadaa qaabka cusubNext »